Ukuhlela ukuhlela uhlelo lwezokuxhumana
NgoMsombuluko, Mashi 8, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UMat Chandler
Ngizohlala ngikhumbula uthisha wami wezomnotho esikoleni esiphakeme, uMnu. Dilk. Ngaphandle kokuzibamba kwakhe okuhlekisayo lapho bekusobala ukuthi ufuna ukuqalekisa (? Awu… AMABHUNGA !?) ukusebenzisa kwakhe ngokuphindaphindiwe izihlangu empeleni ukwazile ukuhambisa izingqondo ezithile zobuhlakani ebuchosheni bami obungezwe ngamahomoni. Phakathi kwezintandokazi zakhe:
Uma wehluleka ukuhlela, uhlela ukwehluleka.
Manje, lokhu kungaphambi kokusungulwa kwalawo maposta amabi ashukumisayo anezithombe zemisila yomkhomo nabantu abagibela izintaba ozibona kuwo wonke amahhovisi ezinkampani. Ukunikezwa kwezeluleko zabahlakaniphile kwakuyinsimu yabazali bakho, othisha, ne-PBS. Yize iseluleko esinjalo singezelelwe, lesi sinamathele kimi.
Manje empilweni yami yobungcweti, ukuhlela kuthatha ingxenye enkulu yesikhathi sami, futhi ngesizathu esihle. Lapho uhlanganisa okuqukethwe futhi isu lokuxhumana kwezenhlalo, umsebenzi owodwa obaluleke kakhulu ukusungula ukuthi imaphi amapulatifomu nezinsizakalo eziwusizo kakhulu kwizidingo zakho bese uhlela indlela yakho ngokufanele.
Akukona nje ukuthi ukuthatha indlela yokuzifunela kunganciphisa ubuntu bakho bomkhiqizo, futhi kuyonakalisa imali. Ngaphandle kokubalwa kwezimali okunembile ngokwenziwe lapho – nesikhathi esichithwe ukwenziwa – imizamo yakho eku-inthanethi imosha isikhathi nemali ngokuphelele.
Noma yisiphi isitolo sedijithali esifanelwe usawoti waso sizokufaka enkambisweni yaso yokuhlela. Uma bengakwenzi, buza ngakho. Uma zinamahloni noma zingenayo, baleka. Uzothola isabelomali sakho sokumaketha esiku-inthanethi sincipha futhi ungabi nalutho olutheni ongalukhombisa sona ngaphandle kwamasheke akhanseliwe.
Ukuze wenze lokho, uma inkampani yakho isesimweni sokuhamba yodwa esikhaleni sedijithali, ngincoma kakhulu ukuthi ubheke Umhlahlandlela we-CMO ku-Social Landscape. Ngokuyinhloko ishidi lokukopela lokuxhumana nomphakathi eliya ezinzuzweni nasezinciphisweni zamapulatifomu nezinsizakalo eziphezulu. Ukuhlaziywa kwenziwa ngu I-97th Floor, futhi umhlahlandlela omkhulu wezinsiza zeshidi elilodwa.
Kunezinsizakalo eziningi zokuxhumana nabantu laphaya; akekho noyedwa olungile, njengoba ukuzama ukuzisebenzisa zonke kungasebenzi. Akunampendulo eyodwa, ayikho indlela eyodwa yokuqukethwe kwezokuxhumana esebenza kuwo wonke amaklayenti. Ngokuhlanganyela ekuhleleni okucabangayo, okwakhayo, usisebenzisa kahle isikhathi sakho nemali.
Tags: Kanjanisocial mediaindawo yezokuxhumanauhlelo lwezokuxhumana
Kungani Kufanele Uzikhiphe Kuhlu Namuhla
I-Social Media Marketing imayelana Nezenhlalo, Hhayi Abezindaba
UJohn W. Rivard
Mar 8, 2010 ku-4: 52 PM
Ukuqala nje ngemithombo yezokuxhumana nokufunda okuningi nsuku zonke. Ngisachaza ukugxila kwami ​​njengoba ngiqhubekela phambili. Isayithi elihle lapha! Ngibheke phambili ekufundeni okuningi.
Mar 9, 2010 ku-1: 36 PM
Ngokubhekisele kumusho othi "Uma uhluleka ukuhlela, uhlela ukwehluleka" Ngingathi kuliqiniso ngokuphelele. Yonke imikhankaso yamabhizinisi ezokuxhumana kufanele ibe nencazelo, inhloso nenhloso yokugcina. Ukusetshenziswa kwamanethiwekhi okuxhumana nomphakathi kuye kwanda ngezinkulungwane amathuba amabhizinisi amancane anakho ukudala ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukuthuthukisa ukusebenza kwamakhasimende, ukukhulisa ukuthengisa nokwakha ubudlelwano. Yini ukhiye uma usudale uhlelo lwakho? Ukuze ube lapho, yakha umphakathi wakho futhi unakekele ngakho!
Ngincoma le mpendulo elandelayo http://bit.ly/aqAGbe ku- Startups.com, lapho uMaria Sipka akhuluma khona ngohlelo oluningiliziwe lokwakha umphakathi wakho online.
I-BTW, ungabeka i-Q & A´s ehlobene nebhizinisi lakho
Mar 10, 2010 ku-10: 10 AM
Lokho uhlu olukhulu, uPete. Siyabonga ngokufundwayo nangomnikelo.
Baningi abantu abahlulekayo ngisho ukubhekana nesinyathelo sokuqala (cabanga ngalokho ofuna ukukufeza) ukuthi yonke inqubo ayisho lutho. Ngaphandle kwezinjongo nezinhloso ezicacile zokusebenzisa amamethrikhi, umane uthwebula kuqala bese ubuza imibuzo ngokuhamba kwesikhathi.